करिश्मा मानन्धरका नजरमा पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री « Pahilo News
करिश्मा मानन्धरका नजरमा पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री
प्रकाशित मिति : 14 August, 2016 2:01 pm
३० साउन । नेताहरुलाई पद र प्रतिष्ठाका लागि मात्र नसोच्न आग्रह गर्ने चर्चित अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर नेताहरु ढल्दा केही नहुने तर देश ढल्नु नहुने तर्क गर्छिन । देश उठ्यो भने नेपाली भनेर गर्व गर्न सकिने र नेपालीको शीर पनि उठ्ने उनी दाबी गर्छिन । ‘अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई गहिरो गरेर अध्ययन गर्ने हो भने हरेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले जनताका सामू शीर झुकाएर हिड्नु पर्ने बाध्यता छ,’ करिश्माले गर्वका साथ भनिन्, ‘जब सम्म यो अवस्थाको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म नेपाल र नेपाली भनेर हामीले गर्व गर्न सक्दैनौँ ।’
लामो समय कलाकारिता क्षेत्रमा बिताएकी करिश्मा भर्खर मात्र राजनीतिमा प्रवेश गरेकी छिन् । नेपालको राजनीति र नेपालका नेतासँग निकै लामो संगत गर्ने अवसर नपाएकी करिश्माले नेपाली राजनीतिका चर्चित नेताहरुको सामान्य गुण–दोषलाई भने हल्काफुल्का बुझेकेको दाबी गरिन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई करिश्माले कसरी बुझेकी छिन् । उनीहरु पाँचै जना पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । उनीहरुका बारे कश्मिाले के भनिन्, उनकै शब्दमाः
कांग्रेस सभापति, शेरबहादुर देउवा
शेरवहादुर देउवा मेरो परिवारसँग नजिक भएको नेता हुनुहुन्छ । मुख्य गरेर विनोद मानन्धर (श्रीमान) र मेरो परिवारकै ईश्वर मानन्धरसँग पनि उहाँको राम्रो सम्बन्ध छ । बेलायतमा अध्ययन गर्दादेखि नै उहाँहरुबीच सम्बन्ध राम्रो थियो भन्ने मैले सुनेकी छु । आरजु भाउजुसँग पनि मेरो र परिवारको राम्रै सम्बन्ध छ । उहाँसँग पार्टीको नेताको हिसावमा भन्दा पनि उहाँप्रति मेरो फरक ढंगको श्रद्धा छ ।
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष, केपी शर्मा ओली
उहाँलाई मैले पहिलादेखि नै चिनेको हो । उहाँको प्रष्ट अडान र बोली पहिलादेखि नै मन पथ्र्यो । हाम्रा अधिकांश नेतालाई हाँस्न नै आउँदैन जस्तो लाग्छ । तर, केपी ओलीसँग अरुलाई हँसाउन र आफू पनि हाँस्न सक्ने क्षमता छ । यो उहाँको सकारात्मक पाटो हो । उहाँ विरामी भएर दिल्लीको अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो । म किनमेलका लागि दिल्ली गएकी थिएँ । त्यसैबेला म उहाँलाई भेट्न अस्पताल पनि गएकी थिएँ । त्यसबेला पनि उहाँले रोगसँग अलिकति पनि डराएको अनुभूति गर्नुभएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उहाँले देश र राष्ट्रियताका पक्षमा लिएको अडान मलाई राम्रो लाग्यो । उहाँका सकारात्मक पाटाहरु धेरै हुँदाहुँदै पनि उहाँ अरु नेताकै जस्तो सत्ता राजनीतिको खेलमा चाँहि बढी नै सक्रिय हो कि जस्तो लाग्छ । उहाँ मात्रै होइन अरु नेताले पनि सत्ताका लागि मात्र होइन देश र जनताका लागि पनि सोच्नु भयो भने देश माथि उठ्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
उहाँले अप्रिय निर्णय गर्दा पनि हाँसेर गर्नुहुन्छ । त्यो उहाँको राजनीतिक कला हो । उहाँ समय र परिस्थितिलाई राम्ररी बुझ्न सक्ने नेता हो, जस्तो लाग्छ । फरक विचार राख्नेहरुलाई पनि उहाँले हाँसेर नै तेजिलो प्रहार गर्न सक्नुहुन्छ । यो पनि उहाँको सकारात्मक पक्ष हो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड
म उहाँलाई व्यक्तिगत रुपमा धेरै चिन्दिन । उहाँसँग मेरो धेरै राम्रो चिनजान पनि छैन । उहाँलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि निकै कम मात्र भेटेको छु । मैले उहाँलाई चिनेको सञ्चार माध्ययमबाट मात्रै हो । सञ्चार माध्ययमको पनि पूरै विश्वास नहुने भएकाले मैले उहाँलाई चिन्ने मौका पाएको छैन ।
म यति भन्न सक्छु । कुनै कालखण्डमा उहाँ निकै शक्तिशाली नेता हुनुहन्थ्यो । अहिले उहाँ धेरै जनाको मनबाट गुम्दै जानुभएको छ । म उहाँलाई भन्न चाहन्छु । हरेक मानिसले आफूलाई सुधार गरेर अघि बढ्न सक्छन् । उहाँमा पनि सुधार हुने धेरै ठाउँ छन् । उहाँले आफूलाई सुधार गरेर लैजान सक्नुहोस्, शुभकामना छ । उहाँको अडान छैन भन्ने पनि आलोचना हुनेगर्छ । यदि त्यस्तो हो भने उहाँले ती कुरामा पनि सुधार गर्न जरुरी छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले नेता, माधवकुमार नेपाल
मैले उहाँलाई पनि धेरै राम्रो गरी चिन्ने अवसर पाएको छैन । उहाँ प्रधानमन्त्री भएका बेला बेलायतबाट एक जना बेलायती ‘सिङ्गर’ नेपाल आउनु भएको थियो । त्यसैबेला एक कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो । त्यसैबेला मैले उहाँलाई नजिकबाट हेर्ने मौका पाएको हो । उहाँ पार्टीमा संयोजनकारी भूमिका खेल्ने व्यक्ति हो भन्ने सुनेकी छु । उहाँ पनि देश र जनताका लागि सोच्ने नेता हो जस्तो लाग्छ । उहाँ तुलनात्मक रुपमा भद्र नेता हो जस्तो लाग्छ । उहाँ त्यति धेरै विवादमा आएको मलाई थाहा छैन ।
नयाँ शक्ति नेपाल, संयोजक, डा. बाबुराम भट्टराई
मैले मेरो पार्टीको नेता भनेर मात्र बाबुराम भट्टराईलाई असल भन्न खोजेको होइन । हरेक मानिसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन् । उहाँका पनि नकरात्मक पक्ष छैनन् भन्दिन । उहाँका पनि नकरात्मक पक्ष होलान् । मैले सबै भन्दा नजिकबाट चिनेको भनेको बाबुराम भट्टराइलाई नै हो । उहाँ बाहिरबाट देख्दा जति कठोर जस्तो देखिनुहुन्छ । तर, नजिकबाट हेर्दा उहाँ असाध्यै साधारण व्यक्ति हुनुहुन्छ । देशप्रति सबै भन्दा बढी चिन्ता गर्ने नेता पनि उहाँ नै हो जस्तो लाग्छ । देश र पार्टीका लागि आफ्नो व्यक्तिगत जीवन पनि नदेख्ने नेता बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्, जस्तो लाग्छ । देश र पार्टी भनेपछि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको पनि ख्याल नगर्ने नेताका रुपमा मैले उहाँलाई चिनेको छु । पहिला मैले उहाँलाई असल नेताका रुपमा मात्र चिनेको थिएँ । अहिले मैले उहाँलाई असल व्यक्तिका रुपमा पनि चिन्ने मौका पाएँ ।